Isinqumo sika-Naomi sokuhoxa kuFrench Open sesekwe ngabaningi - Bayede News
Umpetha womhlaba emdlalweni womphebezo kwabesilisa uNovak Djokovic ubonga isibindi sentokazi esencane egila izimanga kuwona umdlalo womphebezo uNaomi Osaka.
U-Osaka uhoxe emqhudelwanweni omkhulu iFrench Open. Lo mqhudelwano ungeminye engaphansi kweGrand Slam. Eminye iWimbledon, i-US Open ne-Australian Open.
Okwenze yahoxa le ntokazi eneminyaka yobudala engama-23 engeyokudabuka eJapan, kungoba ihlawuliswe izi-$15 000 waphinde wasongelwa ngokuthi akhishwe emqhudelwanweni iRoland Garros ngemuva kokwenqaba ukuhlonipha izibopho zabezindaba.
Le ntokazi ikhale ngokuthi abezindaba ziyawulimaza umqondo wayo, uphinde wacashunwa ithi; “Abezindaba bayathanda ukucindezela abantu, ikakhulukazi uma bebephansi”.
UNaomi uthe izingqinamba zakhe zempilo yengqondo zaqala ngonyaka wezi-2018 ngesikhathi enqoba i-US Open okokuqala ngesikhathi ayebhekene nomdlali amthandayo uSerena Williams.
“Iqiniso ukuthi ngike ngaba nezikhathi zokudangala kusukela ku-US Open ngowezi-2018 futhi ngibe nesikhathi esinzima ukubhekana nalokho. EParis, bengivele ngizizwa ngisengozini futhi ngikhathazekile ngakho ngicabange ukuthi kungcono ngizinakekele ngase ngaqoma ukuthi ngikakhulumi nabezindaba” kusho uNaomi nothe akazisoli ngesinqumo sakhe.
UDjokovic uthe uyamuseka kukho konke uNaomi, ekhuluma nabezindaba ngoLwesibili uthe: “Ngiyameseka, ngicabanga ukuthi ube nesibindi sokwenza lokho. Ngiyadabuka kakhulu ukuthi ubhekene nezikhathi ezibuhlungu nokuhlupheka ngokomqondo. Lokhu bekumele, kusho, kube yisinqumo esinohlonze kakhulu ngasohlangothini lwakhe. Uma edinga ukuthatha isikhathi sakhe sokubhekana nale nkinga abhekene nayo akasithathe, lokho ngikuhlonipha ngokuphelele. Ngiyethemba ukuthi uzobuya eseqinile ngokwanele” kusho uDjokovic.
UNaomi usenqobe i-US Open kabili ngonyaka wezi-2018 nangowezi-2020, waphinde wanqoba i-Australian Open kabili ngonyaka wezi-2019 nangowezi-2021. Kuyimanje le ntokazi emhlabeni ikleliswe endaweni yesibili kanti ngonyaka wezi-2019 yake yazihola phambili.
UDjokovic uthe akumumangazi ukuthi iGrand Slams isabise ngokuthi izokwelula unswinyo olubhekiswe ku-Osaka ngisho nakubaphathi abakhulu bakusasa.
“AbakwaGrand Slam bayazivikela futhi bavikela ibhizinisi labo,” kusho uDjokovic.
Omunye oweseke uNaomi umdlali wegalofu uMichelle Wie Lee, othe utshengise ukuba nesibindi esikhulu.
“Ngicabanga ukuthi okwenziwe uNaomi kuleli sonto utshengise ukuba nesibindi esiyisimanga. Kodwa iqiniso lithi uma ungumuntu wezemidlalo kumele ukhulume nabezindaba, ngoba ngalokho abahleli bomqhudelwano bayakwazi ukuqhuba nokumaketha umqhudelwano wabo” kusho uMichelle.
Uqhube wathi: “Kunzima ukuba umdlali ikakhulukazi uma izinto zingakuhambeli noma ubhekene nezinto eziningi ngale komdlalo. Namanje ngisasho ukuthi uNaomi ube nesibindi, ngiyakholwa nabanye abantu abakwezemidlalo ngokuhlukana kwazo kukhona abakufundile kule ntokazi” kusho uMichelle.
Nabasezweni lakhe uNaomi iJapan, abaxhasi bakhe bathe bayasiseka isinqumo asithathile. Useyoze abonakale kuWimbledon nakuma-Olympics azobanjelwa khona eJapan ngoNtulikazi kuya kuNcwaba.